जीवन रहेको सौर्यमण्डलको एक मात्र ग्रह पृथ्वी | Ratopati
personज्ञानमित्र exploreकाठमाडौं access_timeफागुन १२, २०७६ chat_bubble_outline0
ब्रह्माण्डमा खरबौं आकाशगंगा छन् । प्रत्येक आकाशगंगामा खरबौ खरब तारा छन् । हाम्रो आकाशगंगा मिल्की वे ( Milky Way ) मा रहेका खरबौ खरब ताराहरुमध्ये एउटा तारा हाम्रो सूर्य हो ।
हामी बसेको पृथ्वी सूर्यको सौर्यपरिवार कै सदस्य हन् । अहिलेसम्म ज्ञात भएअनुसार सौर्य परिवारको पृथ्वी ग्रहमा मात्र जीवन छ । अन्य कुनै पनि ग्रहमा अहिलेसम्म जीवन भेटिएको छैन ।
कुनै पनि ग्रहमा जीवन हुर्किनका लागि खर्बौ खर्ब संयोग जुटनु पर्छ । यी खर्बौ खर्ब संयोगमध्ये सबै नै संयोग आफूमा विशिष्ट र महत्वपूर्ण छन् । संयोग शृंखलामध्ये कुनै पनि एउटा संयोग नभएको भए पृथ्वीमा पनि जीवन हुर्किने थिएन । वा भनौ अहिले पनि कुनै एक संयोग मेंटियो भने पृथ्वी पनि अन्य ग्रह जस्तै जीवनरहित हुनेछ ।
पृथ्वीमा जीवन प्रारम्भ हुनुमा एउटा महत्त्वपूर्ण संयोग हो, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी ।हाम्रो पृथ्वी र सूर्यदेखि ह्याभीटेभल जोन’‘ अथवा ‘गोल्डीलाक जोन’ मा रहेको छ । मातृ तारा संग उचित दुरीमा रहेका ग्रहलाइ ह्याभीटेभल जोन’ मा रहेको भनिन्छ । मातृतारासंग दूरी कम अथवा बढ़ी हुँदा ग्रहमा जीवन हुर्किने संभावना रहँदैन । सूर्यबाट पृथ्वीको तुलनामा नजिक रहेका दुइटा ग्रह बुध र शुक्रमा अत्यधिक तापका कारण जीवन हुर्किने उपयुक्त वातावरणको संयोग भएन । त्यसैगरी पृथ्वीको तुलनामा टाढा रहेका अन्य ग्रह मंगल, वृहस्पति, शनिलगायतका ग्रहहरुमा तापको कमीका कारणले उपयुक्त वातावरण जुराउने संयोग घटित हुन सकेन ।
पृथ्वीमा जीवन प्रारम्भ हुनुमा एउटा महत्त्वपूर्ण संयोग हो, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी ।हाम्रो पृथ्वी र सूर्यदेखि ह्याभीटेभल जोन’‘ अथवा ‘गोल्डीलाक जोन’ मा रहेको छ । मातृ तारा संग उचित दुरीमा रहेका ग्रहलाइ ह्याभीटेभल जोन’ मा रहेको भनिन्छ । मातृतारासंग दूरी कम अथवा बढ़ी हुँदा ग्रहमा जीवन हुर्किने संभावना रहँदैन ।
सूर्यबाट प्रकाशका माध्यमले पृथ्वीसम्म आउने ताप र पृथ्वीको भित्री ‘कोर’ बाट बाहिरी सतहसम्म आउने तापका कारण नै पृथ्वीमा तीनवटै अवस्थामा पानी उपलब्ध हुन्छन् । ती तीनवटा अवस्था भनेको ठोस– हिउँजस्तो (Solid), द्रव– तरल पानी (Liquid ) र ग्याँस– जलवाष्प (Water Vapour) हुन्।
हामी जसलाई जीवन भनी बुझ्छौं त्यसका लागि पानीको द्रव अवस्था (तरल पानी) परम आवश्यक छ । पृथ्वीमा जीवनको प्रारम्भ नै पानीमा भएको थियो । कुनै पनि प्राणी पानी बिना बाँच्न सक्दैनन ।
पृथ्वीमा चारैतिर जीवन छ । पृथ्वीमा जीवन एवं तरल पानी उपलब्ध भएकोले यो ब्रह्माण्ड कै अद्वितीय ग्रह हो ।
‘रेडियोधर्मी डेटिङ’ र अन्य साक्ष्य स्रोतका अनुसार पृथ्वीको निर्माण झण्डै ४.५४ अर्ब वर्ष पहिला भएको थियो । पृथ्वीमा जीवनको प्रारम्भ भने १ अर्ब वर्ष पहिला मात्रै भएको हो ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीमा ‘प्रथम जीवन’ को उत्पत्ति ‘अजैविक तत्त्व’ (Abiotic Components And Abiotic Factors ) ले भएको थियो ।
'बायोलोजी’ र ‘इकोलोजी’ काअनुसार जीवनरहित रसायन (Non Living Chemicals) र वातावरणमा रहेका तत्वहरू नै ‘अजैविक तत्त्व’ हुन् । पानी, प्रकाश, रेडियोधर्मिता ( Radiation ), ताप , आद्रता (Humidity ) र वातावरण सबै ‘अजैविक तत्व’ हुन् । यिनैको आपसी संयोगले पृथ्वीमा जीवनको शुभारम्भ भएको मानिन्छ ।
स्वाभाविक प्रश्नको जवाफ पनि सहज र स्वाभाविक छ । आफ्नो अक्ष (Axis ) मा धुम्ने कुनै पनि पिण्ड गोलो नै हुन्छ । प्रयोग गरी हेर । कुनै पनि आकारको वस्तुलाई फन्फनी घुमाउने प्रयास गर ,घुम्न थालेपछि त्यस वस्तुको आकार जस्तोसुकै होस्, त्यो तिमीलाई गोलो देखिन थाल्छ । र, त्यस वस्तुको घूमने क्रम नरोकिएसम्म त्यो वस्तु गोलो नै देखिन्छ । सबै ग्रह, उपग्रह, तारा आफ्नो अक्षमा घुमिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा सबै गोलो देखिन्छन् । वास्तवमा नै यी सबै खगोलीय पिण्ड गोलो हुन् अथवा होइनन् यो जानने कुनै उपाय छैन । तिमी नै सोची हेर, तिमी कोठामा नहुँदा तिम्रो साथीले कुनै वस्तु फनफनी घुमायो । तिमी वस्तु घुम्न थालेपछि कोठामा आयौ । घुमिरहेको वस्तु तिमीले गोलो देख्छौ । र, वस्तु नरोकिएसम्म तिमीसंग त्यो वस्तुको वास्तविक स्वरुप जान्ने कुनै उपाय हुन्न । तिम्रो साथीले घुमाएको वस्तु त एक निश्चित अवस्थामा अवश्य रोकिन्छ । त्यतिबेला तिमीले थाहा पाउन सक्छौ कि घुमेको अवस्थामा गोलो देखिएको त्यो वस्तु वस्तु वास्तवमै गोलो हो कि अन्य कुनै आकारको ? तर हामी यो कुरा खगोलीय पिण्डहरुमा थाहा पाउन सक्‍दैनौं किनभने कुनै पनि खगोलीय पिण्ड कहिल्यै पनि रोकिदैनन । तसर्थ तिनको बारेमा हामीलाई यही मात्र जानकारी छ, ती गोलाकार छन् ।
कुनै पनि आकारको वस्तुलाई फन्फनी घुमाउने प्रयास गर ,घुम्न थालेपछि त्यस वस्तुको आकार जस्तोसुकै होस्, त्यो तिमीलाई गोलो देखिन थाल्छ । र, त्यस वस्तुको घूमने क्रम नरोकिएसम्म त्यो वस्तु गोलो नै देखिन्छ । सबै ग्रह, उपग्रह, तारा आफ्नो अक्षमा घुमिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा सबै गोलो देखिन्छन् । वास्तवमा नै यी सबै खगोलीय पिण्ड गोलो हुन् अथवा होइनन् यो जानने कुनै उपाय छैन ।
तर कुनै पनि खगोलीय पिण्ड गोलो घुमिरहँदा एक प्रकारका छद्म बल अभिकेंद्रिय बल ‘सेन्ट्रीफ्युगल फोर्स’ (Centrifugal Forse ) उत्पन्न हन्छ, यस छद्म बलका कारणले त्यो संरचना पूर्णरुपमा गोलो रहन सक्दैन । यस (‘सेन्ट्रीफ्युगल फोर्स’) को कारणले पृथ्वी पनि पूर्णरूपमा गोलो छैन । पृथ्वीको मध्यको व्यास (Diameter ) १२ हजार ७४२ किमी एवं ध्रुवीय व्यास (Polar Diameter ) १२ हजार ७१४ किमी र अक्षीय व्यास (Equatorial Diameter ) १२ हजार ७५६ किमी रहेको छ ।
पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्नुका साथै आफ्नो अक्षमा पनि परिक्रमा गर्छ । पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न ८६१६४.०९८९०९१ सेकेन्डको समय लाग्छ । यो परिक्रमा अवधिमा गोलो पृथ्वीको जुन भागमा सूर्यको प्रकाश पर्छ त्यहाँ दिन र प्रकाश नपर्ने भागमा रात्रि हुन्छ । माथि भनिएको ८६१६४ सेकेण्डको समय नै तिम्रो एक रात र दिनको अवधि हो । यसैलाइ हामी मोटामोटी रूपमा गणना गर्दा २४ ‌घण्टाको समय भन्छौं । पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षको परिक्रमा गर्न २४ नभएर २३ घण्टा ५६ मिनट र ४. १ सेकेण्डको समय लाग्छ ।
तिमीहरुलाई थाहै छ पृथ्वीले आफ्नो अक्षको परिक्रमा गर्नुका साथै सूर्यको पनि परिक्रमा गर्छ । सूर्यको एक परिक्रमा गर्न पृथ्वीलाई ३ करोड़ १४ लाख ७१ हज़ार ४३७ दशमलब १२७ सेकेण्डको समय लाग्छ । यो नै हामीले मानेको एक वर्षको समय हो । हामीले सजिलोका लागि एक वर्षमा ३६५ दिनको गणना गर्छौं ।तर पृथ्वीलाई सूर्यको एक परिक्रमा गर्न ३६५ दशमलब २५ दिनको समय लाग्छ । प्रत्येक ४ वर्षमा यो बढ़ी भएको समयलाई समायोजन गरिन्छ । फेब्रुअरीमा २९ दिन पनि हुन्छन् भन्ने तिमीहरुलाई थाहै छ ।
पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा दीर्घवृत्तीय (Elliptical ) कक्ष (Orbit) मा गर्छ । यसले गर्दा सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी परिवर्तित भइराख्छ ।आफ्नो परिक्रमा पथमा पृथ्वी सूर्यको नजिक पुग्दाको स्थितिलाई अपसौरिक (Perihelion) भनिन्छ र टाढा हुँदाको स्थितिलाई उपसौरिक (Aphelion) भनिनछ ।
पृथ्वी र सूर्य बीच को औसत दूरी १४ करोड़ ९६ लाख किमी रहेको छ । पृथ्वी र सूर्य बीचको यसै दूरीलाइ १ ऐ यू भनिन्छ । पृथ्वी र सूर्य नजिक हुँदाको स्थितिमा यो दूरी घटेर १४ करोड़ ७० लाख ९५ हज़ार किमीमा आईपुग्छ । यसैगरी दुबै टाढा हुँदाको स्थितिमा यो दूरी बढेर १५ करोड़ १९ लाख ३० हज़ार किमीसम्म पुग्छ ।
पृथ्वी पूर्वमुखी ( Eastward) भएर आफ्नो अक्षमा घुम्छ । पृथ्वीको अक्षमा घुम्ने गति ४६५ मीटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । यस गतिलाइ घण्टामा परिवर्तित गर्दा यसको मान १६७४ किमी प्रति घण्टा हुन आउछ । पूर्वमुखी भएर घुमेका कारणले नै संसारको सबै ठाउँमा सूर्योदय पूर्वबाट भएको देखिन्छ ।
गोलो पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफल ५१ करोड ७२ हजार वर्ग किमी छ । यस क्षेत्रफलको ७०.८ प्रतिशत भाग ठुलfठूला महासागरले ओगटेका छन् । महासागरले ओगटेको भागको क्षेत्रफल झण्डै ३६ करोड़ ११ लाख ३२ हजार वर्ग किमी छ । बाँकी १४ करोड़ ८९ लाख ४० हजार वर्ग किमी मात्रै जमीन छ ।
तिमीहरूले गणितको कक्षामा गोलो वस्तुको आयतन (Volume) ,क्षेत्रफल (Area),त्रिज्या (Radius ) र परिधि (Circumference ) कसरी ज्ञात गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पढ़ेको हुनुपर्छ । वस्तुको व्यास ( Diameter ), त्रिज्या अथवा क्षेत्रफल मध्ये कुनै एउटा कुरा ज्ञात छ भने हामी सजिलै अन्य कुरा थाहा पाउन सक्छौं । यस लेखको माथि कतै पृथ्वीको डायमीटर कति छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको सहायताले हामी पृथ्वीको आयतन, परिधि, रेडियस क्षेत्रफल सबै थाहा पाउन सक्छौं ।
पृथ्वी लाखौं लाख विशेष गुणले सम्पन्न भएकोले यहाँ जीवन हुर्किन, फर्किन सम्भव भएको हो ।
श्रृङ्खलाका अन्य लेखहरु
सूर्यसंग दूरी — १४९६००००० किमी (१ ऐ यू )
सूर्यसंग अधिकतम दूरी (उपसौर) — १५१९३०००० किमी (१.०१५५९ ऐ यू )
सूर्यसंग न्यूनतम दूरी (अपसौर) — १४७०९५०००० किमी (०.९८३२६८७ ऐ यू )
सूर्य परिभ्रमण समय — ३६५.२५ दिन (१ वर्ष)
परिभ्रमण गति — २९.७८ किमी /सेकेण्ड (१०७२०० किमी / घन्टा)
उपग्रह— प्राकृतिक १ चन्द्रमा (१६०० मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह, ३० हजार अन्तरीक्ष फोहरहरु)
परिधि (Circumference ) — ४००७५.०१७ किमी
सतहको कुल क्षेत्रफल — ५१००७२०० वर्ग किमी (१४८९४०००० वर्ग किमी जमीन (२९.२ प्रतिशत), ३६११३२०००वर्ग किमी जलमग्न (७०.८ प्रतिशत)
आयतन(Volume ) — १.०८३२१ * १०१२ घन किमी
द्रव्यमान (Mass ) — ५.९७२३७ * १०२४ किग्रा
घनत्व(Density ) —५.५१४ ग्राम / घन सेंटीमीटर
सतहको गुरुत्वाकर्षण — ९.८०७ मीटर /सेकेण्ड
पलायन वेग (स्केप भेलोसिटी )—११.१८6 किमी /सेकेण्ड (४०२७० किमी /घण्टा )
अक्षमा परिभ्रमण समय — २३ घण्टा ५६ मिनेट ४.१ सेकेण्ड (१ दिन र रात )
अक्षमा परिभ्रमण गति — ४६५ मीटर /सेकेण्ड ( १६७४ किमी /घण्टा )
अक्षमा झुकाव (Tilt ) — २३.४३९ डिग्री
Title Photo: https://solarsystem.nasa.gov